Awoodda Midnimada - Daryeelka Bulshada ee Ururka Shaqaalaha Awoodda Midnimada - Daryeelka Bulshada ee Ururka Shaqaalaha
Adiga ayaan kuu taaganahay
Daryeelka Bulshada ee Union, ujeedadayadu waa inaan ku dhalino sinaan adeegsi daryeel caafimaad oo bukaanku hogaamiyo oo soo dhaweynaya isla markaana xoojinaya bulshooyinkeena iyadoo la isku dhafayo jirka, maskaxda, iyo qalbiga.
Bulshooyinka firfircoon ee caafimaadka qaba oo ay taageerayaan daryeel caafimaad oo loo wada dhan yahay oo qaata xubin kasta dhaqankiisa gaarka ah, baahidiisa, iyo qiyamkiisa, kuna dhiirrigeliya inay sameeyaan xulashooyin caafimaad oo shidaal u ah wanaaggooda iyo ladnaanta dadka kale.
Kooxdayada Daryeelka waxa loogu talagalay inay la shuraakoobaan bukaanadayada si ay u daboolaan baahidooda daryeel caafimaad ee gaarka ah iyaga oo isku daraya jidhka, maskaxda, iyo wadnaha.
Ururka Daryeelka Bulshada waa guri caafimaad oo bukaan-jileec ah oo qaran ahaan la aqoonsan yahay sababta oo ah habkayaga aan u bixino adeegyada daryeelka caafimaadka ee ku jira dhaqanka, baahiyaha iyo qiyamka bukaan kasta. Kooxdayada daryeelka loo dhan yahay waxay la yimaadaan bulshadeena iyagoo wata khibradahooda gaarka ah iyo dhaqamada kala duwan.
Sida xarun caafimaad oo heer federaal ah, 51% tabaruceheena Board of Directors waa bukaanada Daryeelka Bulshada Ururka. Tani waxay la macno tahay in aanu haysano isku darka aan caadiga ahayn ee hogaamiyayaasha bulshada kuwaas oo fahma oo qaata nolosha adag iyo awoodaha gaarka ah si adagna uga shaqeeya sidii ay u jebin lahaayeen dhammaan caqabadaha daryeelka.
Waxaan bixinaa daryeelka caafimaadka qoyska aasaasiga ah, daryeelka ilkaha, caafimaadka habdhaqanka, iyo taageerada bulshada oo dhan 10+ Lancaster & Lubnaan goobaha. Waxaan bixinaa qiime jaban ama khidmad caafimaadka iyo daryeelka ilkaha ee ka hortagga xarumahayaga, kaydinta barnaamijka 340B, iyo qiyaas iimaan wanaagsan.
Waxaan aaminsanahay caafimaadka oo dhan-jidhka, maskaxda, iyo wadnaha. Markaa waxaanu isku darnay 360 Care—daryeelka degdega ah ee jirada, taageerada caafimaadka dabeecadda, taageerada bulshada, daryeelka caafimaadka qoyska, daryeelka ilkaha, iyo farmashiyaha—dhammaan isku meel ama ku dhow!
Xididdada Xarunta Caafimaadka Lancaster
Waxay dhasheen 1972
Strawberry Street oo ah wakhti dhiman, xarun caafimaad oo iskaa wax u qabso ku shaqeysa, iyadoo la arkayo kuwa u baahan daryeel iyo taageero. Markii ay korayeen, waxay awoodeen inay ku daraan shaqaale mushahar qaata kooxdooda. Ilaa 1980, waxay bilaabeen bixinta daryeelka ilkaha marka lagu daro daryeelka caafimaadka. Sidoo kale 1980, waxay u guureen xafiis ku yaal Rockland Street, waxay ku midoobeen Lancaster Neighborhood Health Centre iyo SACA Health Center oo waxay u bixiyeen ururkii cusbaa ee casriga ahaa "SouthEast Lancaster Health Services." Sannadkii 2018, ururku wuxuu u beddelay magaca "Xarunta Caafimaadka Lancaster" si ay si fiican uga tarjumto adeegyadooda sii kordhaya iyo goobaha ay ku dhex leeyihiin bulshada.
iyada oo loo marayo hoggaankii duqa magaalada ee xilligaas Janice Stork, Magaalada Lancaster waxay hibo u siisay SouthEast Lancaster Adeegyada Caafimaadka dhul ku yaal 625 South Duke Street. Ilaa 1996, waxay ururiyeen lacag ku filan si ay ugu dhisaan xarun caafimaad oo cusub dhulkii loogu deeqay. Dhismuhu wuxuu markii hore ka koobnaa 14 qol oo ah baaritaanka caafimaadka iyo 6 qalliinka ilkaha iyo iskaashi cusub oo lala yeesho Barnaamijka Kalkaalinta Caafimaadka ee HACC si kor loogu qaado waxbarashada bukaanka. Sannadkii 2011, dayactir weyn oo lagu sameeyay xarunta caafimaadka ee Duke Street ayaa ka dhacday ballaarinta awoodda laga bilaabo 6 illaa 13 qalliinka ilkaha, oo ay ku jiraan aagga Ilkaha Caafimaadka Carruurta oo loogu talagalay in lagu bixiyo daryeelka ilkaha ee raaxada leh oo wacan.
Xarunta caafimaadka Lancaster waxay xarun caafimaad ka furatay Xarunta Fursadaha Bright Side ee dhanka Koonfur-galbeed ee Magaalada Lancaster bishii Nofembar, 2006. Xarunta caafimaadka waxaa ku jira 6 qol oo baaris caafimaad ah. Waxa jirtay wakhti ay xaruntooda Bright Side xarun u ahayd qoysaska ku cusub bulshadeena.
Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waxay soo iibsatay mid ka mid ah Dhirta Awoodda asalka ah ee Thomas Edison ee ku taal magaalada hoose ee Lancaster. Labadii sano ee soo socota, Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waxay qabatay Olole guul leh, Mashruuca Sinnaanta Caafimaadka iyo Helitaanka Lancaster (HEAL) si loogu cusboonaysiiyo goobta taariikhiga ah xarun caafimaad oo horusocod leh oo leh 24 qol oo lagu baaro caafimaadka. Xarunta Wadada Biyaha waxaa loo furay dadweynaha xagaagii 2010.
Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waxay ballaarisay adeegyadooda si ay ula kulanto baahiyaha daryeelka caafimaad ee sii kordhaya ee bulshadeena iyadoo lagu daray xarun caafimaad 5aad oo ku taal New Holland Avenue. Maaddaama ay tahay dhismahooda labaad ee ugu weyn, degelkani wuxuu ku daray 18 qol oo imtixaan ah, oo wadar ahaan ah 64 qol oo baaritaanka caafimaad ah dhammaan 5 goobood.
Xarunta Caafimaadka ee Welsh Mountain Roots
Waxay dhasheen 1969
Xarunta Caafimaadka ee Welsh Mountain waxaa loo aasaasay mashruuc CAP ah, Ururka Caafimaadka Kirishtaanka ee Degmada Lancaster, Ururka Kalkaaliyeyaasha Booqashada & Xafiiska Fursadda Dhaqaalaha ee Mt. Guri iskuul oo hal qol ah.
Kobaca Baahiyaha Loo qabo
Xarunta Caafimaadka ee Welsh Mountain waxay u guurtay dhisme cusub, oo lagu daray urur aan faa'iido doon ahayn, waxay soo bandhigtay guddigoodii ugu horreeyay ee agaasimayaal, waxay keeneen dhakhtarkoodii ugu horreeyay ee waqtiga buuxa, iyo ballaadhinta adeegyada oo ay ku jiraan daryeelka ilkaha.
Beesha Dharka Cad
Magaca xarunta caafimaadka ayaa loo beddelay "Welsh Mountain Medical & Dental Center" si ay si fiican ugu metelaan daryeelkooda ilkaha ee dhowaan ay ku darsadeen. Intaas waxaa sii dheer, waxay soo bandhigeen Barnaamijkooda Fardo & Buggy, kaasoo siin jiray talaalada, baaritaanada wanaagsan ee caruurta, kahortaga sunta rasaasta, iyo caafimaadka iyo barbaarinta waalidnimada bulshada Dharka Cagaaran sanad walba.
Dareen Daryeel Joogto ah
Sannadihii 1990-meeyadii, Welsh Mountain Medical & Dental Center waxay ka soo kortay aqal hore oo iskuul oo ay ka dhigtay xarun caafimaad oo casri ah, 4,400 oo cag laba jibbaaran ah una adeegta in ka badan 4,000 oo bukaan-socod iyo ilko sanadkiiba ah. Iyada oo ay weheliso xarun ballaadhan, waxay sidoo kale ballaariyeen hadafkooda si ay u siiyaan daryeel caafimaad oo dhammaystiran, oo tayo leh qof walba.
Laga soo bilaabo Bilowga Khushuuca
In kasta oo Welsh Mountain Medical & Dental Center ay si weyn uga beddeshay bilowgooda hoose, haddana waxay ku fooganaayeen hadafkooda ku saabsan bixinta tayada, daryeel caafimaad oo dhammaystiran dhammaan bukaan socodka intii lagu jiray sanadihii 2000s.
Sannadkii 2004, xarunta caafimaad waxay ka furtay goob caafimaad oo labaad magaalada New Holland, PA, oo u adeegta kuwa ku nool aagga Waqooyi-bari ee gobolka.
Daryeelka Caafimaadka ee Qof walba.
Iyada oo taageero laga helayo Wadada Midnimada Gobolka Lubnaan iyo ururada kale ee bulshada, xarun caafimaad ayaa laga furay Lubnaan sanadkii 2011. Goobta ilkaha ayaa si dhakhso leh u raacday 2014.
Horraantii 2016, iyadoo uu hagayo agaasimihii guud ee xilligaas Jackie Concepcion, xarunta caafimaadka ayaa magacooda loo beddelay "Xarumaha Caafimaadka ee Welsh Mountain" si loo mideeyo astaanta loona caddeeyo himiladooda iyo aragtideeda, taas oo saadaalinaysay koritaanka dhinaca fog.
Bilihii xagaaga ee 2018, Xarumaha Caafimaadka ee Welsh waxay bilaabeen dhisme cusub, xarun casri ah oo ku taal Wadada Church ee Lubnaan. Goobta cusub waxay bedeshay xarun caafimaad oo hore u jirtay Lubnaan. Goobta cusubi waxay u sahlaneyd bukaankooda iyo bulshadooda.
Sannadkii 2019, Xarumaha Caafimaadka ee Welsh Mountain ayaa mar labaad ballaariyay si loogu daro goob cusub oo ku taal Denver, PA.